शिव श्रेष्ठले फिल्मी दुनियाँको कालो कर्तुतको पर्दाफास गर्छु भनेपछि…हंगामा !!! – News Nepali Dainik
शिव श्रेष्ठले फिल्मी दुनियाँको कालो कर्तुतको पर्दाफास गर्छु भनेपछि…हंगामा !!!
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १८, २०७७ समय: १२:४१:५३
*#*एक समयका चर्चित अभिनेता शिव श्रेष्ठ चार दशकदेखि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।‘जीवन रेखा, ठुल्दाइ, चिनो, कान्छी, ट्रक ड्राइभर, धर्म संकट’ जस्ता एकसेएक उत्कृष्ट फिल्ममा काम गरेका उनी कुनै समय पाकिस्तानी फिल्मका पनि ठूला स्टार थिए ।
उनले पाकिस्तानी फिल्मबाट ५ वटा राष्ट्रिय अवार्ड समेत जितेका छन् । उनले प्रायः फिल्ममा एक्सन भूमिका निभाएका छन् ।जीवन्त अभिनयबाट दर्शकको मनमा बस्न सफल शिव श्रेष्ठले फिल्म निर्माणमा समेत हात हालेका छन् ।
फिल्म फ्लप भएपछि करिश्मा र शिव श्रेष्ठको सम्बन्ध चिसियो !*****
उनले निर्माण गरेको फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ यही माघ १ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको थियो । यो फिल्मबाट उनका छोरा शक्ति श्रेष्ठ र अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरकी छोरी कविताले अभिनयमा डेब्यू गरेका छन् । यसकारण यो फिल्मप्रति धेरैको आशा, अपेक्षा र चासो थियो।****
Last Updated on: January 31st, 2021 at 12:41 pm